Nhọrọ nke Alicia Giménez Bartlett | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carmen Guillen | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela
Ma eleghị anya, aha a mara gị nke ọma. Eeh, o meela onye mmeri ugbua Onyinye mbara ala 2015 ya na akwukwo "Ndị gba ọtọ". Ma Alicia Giménez abụghị naanị onyinye Planeta, ọ bụ ọtụtụ ihe. Taa, anyị na-atụle n'isiokwu a ụfọdụ n'ime ọrụ ya kacha mma. Nọnyere anyị karịsịa ma ọ bụrụ na-amasị gị onye nyocha, ị ga-ahụ ya ebe a.
Nke a bụ nhọpụta nke Alicia Giménez Bartlett chere karịsịa maka ndị kwuru na ha amachaghị ya nke ukwuu mgbe enyere ya onyinye ikpeazụ ya. Oru ya kwesiri ka agu ya, anam agwa gi.
1 "Ọnwụ nke Ọnwụ" (1996)
2 "Ebe Ọ Na-adịghị Onye Ga-achọta Gị" (2011)
3 "Ọ dịghị onye chọrọ ịma" (2013)
4 "Mpụ m agaghị echezọ" (2015)
5 "Ndị gba ọtọ" (2015)
"Ọnwụ nke Ọnwụ" (1996)
Ọ bụ akwụkwọ mbụ nke Usoro Petra Delicado. Onye nyocha ndị uwe ojii Petra Delicado si na Barcelona na-ede akwụkwọ na onye na-esote ya Fermín Garzón ga-ahụ maka okwu mmeko nwoke n'ike n'ike nwere otu ihe ngosi: akara dị ịtụnanya nke onye edina n'ike dinara na ogwe aka onye ahụ.
"Ebe Ọ Na-adịghị Onye Ga-achọta Gị" (2011)
Otu dibia na-agwọ ọrịa uche nke Sorbonne pụrụ iche na ndị omekome na-aga Barcelona na 1956. Ọ chọrọ ịmụrụ ihe gbasara ikpe Teresa Pla Meseguer, nke akpọrọ La Pastora, nwanyị a na-ebo ebubo ọnwụ nke iri abụọ na itoolu. Ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nchekwa obodo na-achọkarị, ọ wee bụrụ akụkọ ama ama n'ihi na ọ bụrụ pụọ n'efu. Naanị onye odeakụkọ nọ na Barcelona yiri ka ọ nwere akara ngosi dị mkpa banyere agwa ahụ, mana ihe onye njem French na-atụ aro bụ ihe na-enweghị isi: ọ chọghị ozi gbasara Teresa, mana nzukọ ihu na ihu. N'ime nyocha ha niile, ha ga-ezere nche ndị nche, ịmata ọdịiche dị n'etiti ndị ụgha na izere otu puku nsogbu na-abịakwute ha. Akwụkwọ akụkọ ahụ wee bụrụ ọchụchọ, ụgbọ elu, njem na-ekpughe nhụsianya na mmadụ nke Spain dị egwu. Na etiti akụkọ a na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ mmasị, karịa akụkọ ifo nke ndị agha okpuru, na-apụta na agwa a na-atụghị anya ya nke La Pastora, akụkọ ihe mere eme na ezigbo, onye na-agba ọsọ site na ụwa na onwe ya.
Ebe Onweghi Onye Ga-achota Gi bu ihe omuma banyere ihe omuma nke oge gara aga na owu ọmụma na-enweghi ngwụcha nke ụmụ mmadụ.
"Ọ dịghị onye chọrọ ịma" (2013)
Onye nyocha Petra Delicado na osote onye nyocha bụ Fermín Garzón ketara onye nwụrụ anwụ nke gbachiri nkịtị ruo afọ ise: Alfonso Siguán, onye ahịa azụmaahịa 70 si Barcelona, ​​gburu na ọnọdụ mmekọahụ siri ike. A hụrụ ozu ya n'ụlọ ya, ebe ọ gara na otu nwa agbọghọ na-agba akwụnata. Blameta ahụ dara ya pimp; mana achọtara ya nwụrụ n’aka nke ya na Marbella, ụbọchị atọ ka emechara. Emechiri nnyocha ahụ na ụgha. Ugbu a Petra na Fermín chere ihu na-ekwusi egwu nke naanị onye àmà ahụ, nwanyị akwụna ahụ, na ihe ijuanya nke ọkachamara na ezinụlọ ya. Nnyocha ahụ kwagara Rome, ebe Petra na-ahụ ọnọdụ nke ihe egwu na ihe ịma aka dị ọhụrụ nye ya na nke gosipụtara ikike Alicia Giménez Bartlett nwere ime Petra Delicado otu n'ime ndị mara mma na akwụkwọ akụkọ Spanish taa.
"Mpụ m agaghị echezọ" (2015)
N'ime oge itoolu, Petra Delicado na-agụ kpakpando na nyocha nke ọtụtụ mpụ ndị ọzọ na-emebi ọdịnihu nke ihe ndị dị mkpa dị ka ekeresimesi, ememme ma ọ bụ ezumike oge okpomọkụ. Ọbụna n'oge ndị ahụ onye nyocha nwere ike ileghara ohere ọ bụla chere ya ihu. Ndụ ezinụlọ na oge ya a na-apụghị izere ezere na-etisasị oge niile site na ọnụnọ mpụ na-abịaghachi mgbe niile, ma na-ekpughe ihe omume zoro ezo nke kachasị atụ aro gbasara nsogbu anyị.
Akwụkwọ akụkọ a bụ 2015 Pepe Carvalho Nrite.
"Ndị gba ọtọ" (2015)
Ọ nweghị onye nwere ike iche n'echiche oke oge nsogbu nwere ike ịtụgharị anyị n'ime ndị anyị na-echeghị na anyị nwere ike ịbụ. Mụ nwoke gba ọtọ bụ akwụkwọ akụkọ banyere ugbu a anyị bi na ya, ebe ụmụ nwoke iri atọ ma ọ bụ karịa na-efunahụ ọrụ ha ma nwee ike ịkwụsị ịgba ọtọ na klọb, yana ebe nke ọ bụla Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ebute ọrụ ọrụ ha ụzọ karịa mmetụta ọ bụla ma ọ bụ nke ezinụlọ. N'akụkọ a, ndị ikom na ndị inyom a na-ezukọ ma na-emekọrịta, ha ga-eme ya na nsonaazụ a na-atụghị anya ya. Mmekọahụ, ọbụbụenyi, ịdị ọcha na ihe ọjọọ, ha niile n'ime akwụkwọ a.
Gị onwe gị, olee nke ị ga-amalite?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Nhọrọ nke Alicia Giménez Bartlett
Olee akwụkwọ e bipụtara n'afọ a mụrụ gị?